Umuntu uthuthuke iminyaka eyizinkulungwane ezingamashumi zomlando ukufika lapho bekhona namuhla. Kodwa, abantu bendalo Yami yasekuqaleni bacwile enkohlakalweni kudala. Sebeyilokhu ebengingakuhlosile, ngakho abantu, ngendlela engibabona beyiyo, abakufanele ukubizwa ngabantu. Bangamakhoba abantu, baphangwe uSathane bayizidumbu ezibolile lezo uSathane ahlala kuzo futhi azigqokile. Abantu abakholelwanga nakancane kubukhona Bami, noma bamukele ukufika Kwami. Abantu basabela ezicelweni Zami ngokukhononda kuphela, bavumelane nazo okwesikhashana, bangabelani Nami ngobuqotho injabulo nosizi. Njengoba abantu bengibona njengongenakuqondwa ngokukhononda bangimamathekela ngokuzenzisa, bedalula isimo sabo sokutotoselwa emandleni. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abanalo ulwazi ngomsebenzi Wami, nakancane nje inhloso Yami namuhla. Angibe neqiniso kunina nonke - uma usuku lufika, ukuhlupheka kwanoma ubani ongikhonzayo kuzobalula ukukuthwala kunokwakho. Izinga lokholo lwakho Kimi, empeleni alwedluli olukaJobe—ngisho nokholo lwabaFarisi bamaJuda lwedlula olwakho-ngakho ngezinsuku zomlilo ezizayo uzohlupheka kakhulu kunabaFarisi ngenkathi besolwa uJesu, nangaphezulu kwabaholi abangama-250 ababemelene noMose, nangaphezulu kweSodoma ihangulwa amalangabi embubhiso. Ngenkathi uMose eshaya idwala, amanzi anikezwe nguJehova aphuma, bekungenxa yokholo lwakhe. Ngenkathi uDavide edlala umculo wokudumisa Mina, Jehova— ngenhliziyo yakhe egcwele injabulo kwakungenxa yokholo lwakhe. Ngenkathi uJobe elahlekelwa yimfuyo yakhe ezintabeni, walahlekelwa izinto zomndeni ezingenakulinganiswa nemali, kanti umzimba wakhe ubugcwele amathumba, bekungenxa yokholo lwakhe. Ngenkathi ezwa izwi Lami, Jehova, wabona inkazimulo Yami, Jehova, bekungenxa yokholo lwakhe. Ukuthi uPetru wayengalandela uJesu Kristu, bekungokholo lwakhe. Ukuthi angabethelelwa mina esiphambanweni anikeze ubufakazi obukhazimulayo, nalapho bekungenxa yokholo lwakhe. Ngenkathi uJohane ebona umfanekiso okhazimulayo weNdodana yomuntu, bekungokholo lwakhe. Ngenkathi ebona umbono wezinsuku zokugcina, kwakuse yilona belu ukholo lwakhe. Uma abantu bezizwe bethola isambulo Sami, ukuthola ukuthi ngibuye ngenyama ngenza umsebenzi Wami phakathi kwabantu, nalokho kungenxa yokholo lwabo. Akubona bonke abashaywe izwi Lami elinzima base beduduzeka besinda kanjalo ngenxa yokholo lwabo. Labo abakholwa Yimi badlule ezihluphekweni, akubona labo abalahlwe nawumhlaba? Labo abaphila ngaphandle kwezwi Lami, bebalekela ukuhlushwa ngezilingo, ababhekani futhi nokulahlwa ngumhlaba na? Bafana namaqabunga asekwindla aphephezela lapha nalaphaya angenandawo yokuphumula, ngingasakhulumi ngezwi Lami lokududuza. Yize isijeziso Sami nokuhlanza kungabalandeli, akuzona izinxibi, ezintanta yonke indawo ezizula emigwaqeni engaphandle kombuso wasezulwini? Ngabe umhlaba ngempela uyindawo yakho yokuphumula? Ngabe ungathola ukumamatheka kokukhululeka emhlabeni ngokugwema ukujezisa Kwami? Ungasebenzisa ngempela injabulo yakho edlula ngokushesha njengesembozo enhliziyweni yakho engenalutho? Ungakhohlisa noma ubani emndenini wakho, kodwa uzohlala njalo ungekwazi ukungikhohlisa Mina. Njengoba ukholo lwakho lungengakanani, kuze kube yinamuhla uselokhu ungenamandla ukufikela ukuthola noma yikuphi ukujabula impilo engakuletha. Ngiyakweluleka: kungcono ukuchitha ngobuqotho ingxenye yempilo yakho Kimi kunokuthi impilo yakho uyichithe kokuvamile nasemisebenzini ematasa yenyama, uqinisela kukho konke ukuhlupheka umuntu angekumele. Kusiza ngani ukuzigcina wena kangangokuthi ubalekele ukujezisa Kwami? Kusiza ngani ukuzifihla ekujeziseni Kwami kwesikhashanyana bese uvuna ukuhlazeka kwaphakade nokujeziswa kwaphakade? Angeke, ngempela ngigobele noma ngubani entandweni Yami. Uma ngabe umuntu uzimisele ngempela ukuthobela wonke amacebo Ami, angeke ngimphathe kabi. Kodwa ngidinga ukuthi bonke abantu bakholwe Kimi, njengoba uJobe akholwa Kimi, Jehova. Uma ngabe ukholo lwakho lwedlula loluya olukaTomase, khona-ke ukholo lwakho luzothola ukutuswa Yimi, ekuthembekeni kwakho uzothola intokozo Yami enkulukazi, futhi uzothola inkazimulo Yami ngesiqiniseko ezinsukwini zokuphila kwakho. Noma kunjalo, labo abakholelwa emhlabeni nakuSathane bazenze lukhuni izinhliziyo zabo, njengezihlwele zaseDolobheni laseSodoma nezinhlamvana zesihlabathi ziphephukela emehlweni abo neminikelo evela kudeveli isemilonyeni yabo. Izinhliziyo zabo ezikhohlisiwe kade zathathwa ngomubi lowo ogabadele umhlaba, cishe nayo yonke imicabango yabo iphangwe yidemoni lasemandulo. Ngalokho ukholo lwabantu luhambe nomoya, futhi abakwazi nokubona nomsebenzi Wami. Abangakwenza nje ukuphatha noma ukuhlaziya ngokuwalazela, ngoba sebevele bangenwe ushevu kaSathane.
Okwedlule：Lapho kuya kuNkulunkulu, kuthini ukuqonda kwakho?